ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များအလိုက် မဲဆန္ဒနယ် စာရင်းများကြေငြာ - Yangon Nation News
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သက်ဆိုင်ရာ
လွှတ်တော်များအလိုက် မဲဆန္ဒနယ် စာရင်းများကြေငြာ။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် က ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၁၁ / ၁၁၂/၁၁၃/၁၁၃) တို့ဖြင့်
ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၃၃၀ နေရာ
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၁၆၈ နေရာ
တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်နော် မဲဆန္ဒနယ် ၆၄၄
နေရာ နှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာ ၂၉ နေရာ
တို့အတွက်မဲဆန္ဒနယ် စာရင်းတွေကို ဒီကနေ. ရက်စွဲနဲ.
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များစာရင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ UEC Website Link တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များစာရင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ UEC Website Link တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များစာရင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ UEC Website Link တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်များစာရင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ UEC Website Link တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။